Fomba mahazatra miaraka amin'ny pataloha jeans sy t-shirt hitsidika ny tanàna | Bezzia
Maria vazquez | 03/05/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Mpiara-dia lehibe i Jeans rehefa mamorona akanjo mahazatra momba ny. Saika isika rehetra dia manana pataloha jeans iray, fara fahakeliny, ao anaty fitafiantsika, ary anisan'ireny dia misy hatrany ny mpivady izay miloka rehefa mitady fiononana lehibe indrindra isika.
Miaraka amin'ireo pataloha jeans izay ahazoanao aina, Amin'ny ambaratonga rehetra, azonao atao ny manamboatra ireo fomba rehetra arosontsika anio. Ny fomba tonga lafatra mandritra ireo andro ireo rehefa miala ao an-trano isika tsy misy drafitra na rehefa fantatsika fa tsy maintsy mitety faritra lehibe ao an-tanàna isika.
Ary raha miresaka drafitra namboarina sy mandeha an-tongotra lavitra isika, dia tsy misy fitaovana manampy antsika hanome fampiononana lehibe kokoa noho ny vitsivitsy T-shirt na kiraro fanatanjahan-tena. Raha efa nomaninay ny antsasaky ny volantsika. Ny sisa ataonao dia ny misafidy ny tampony mety.
Amin'ny lohataona a lobaka na T-shirt fototra lasa safidy lehibe izy ireo. Ny lobaka fotsy dia fototra iray ahafahantsika mampiditra azy roa amin'ny akanjo mahazatra toa ilay noforonintsika ankehitriny ary koa ireo akanjo fanao mahazatra kokoa. Raha miloka amin'ny lobaka ianao dia ataovy amin'ny akanjo fotsy na mainty izany mba hamoronana akanjo tsotra izay tsy leo anao mihitsy.
Ho an'ireo maraina na alina mangatsiatsiaka dia safidio a palitao na palitao fohy hanampy anao hiady amin'ny sery. Raha toa ianao ka mitady akanjo fototra hamoronana endrika tsotra dia mamorona fifanoheran-doko eo anelanelan'ny palitao sy ny lobaka mba hahaliana azy.
Aza adino ny momba ny akanjo ifotony raha te hisarika ny saina amin'ny singa manokana amin'ny fitafianao ianao. Tampony vita pirinty na misy antsipirian'ny fironana toa collars be loatra na tanany voluminous hampifantoka ny mason'ity rehetra ity ity.
Moa ve ianao matetika mampiasa ny fitambaran'ireo pataloha jeans sy akanjo amoron-dranomasina mba hamoronana akanjo mahazatra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Fomba mahazatra miaraka amin'ny pataloha jeans sy t-shirt hitetezana ny tanàna